6 Siyaabood Oo Aad Ku Xoojin Karto Xiriirka Idiin Dhexeeyo Adiga Iyo Gacaliyahaaga/Gacalisadaada - Aayaha
6 Siyaabood Oo Aad Ku Xoojin Karto Xiriirka Idiin Dhexeeyo Adiga Iyo Gacaliyahaaga/Gacalisadaada
in Editor's Picks, XIRIIRKA IYO GUURKA
Guurkaagu fursad wanaagsan ayuu heystaa haddii aad xoojiso xiriirka idiin dhexeeya adiga iyo gacaliyahaaga ama gacalisadaada.
Hoos ka aqriso 6 qaabood oo lagu xoojiyo xiriirka.
Inaad dhageysatid waxa ay gacalisadaadu leedahay waxay xoojin doontaa xiriirka idinka dhexeeya labadiina. Markaad si taxadar leh u dhageysatid lamaanahaaga waxaad tustay inaad daneyneysid isla markaana qiimo uu ku fadhiyo xiriirkiina.
Mar kasta ha isdifaacin
Dabeecad ahaan waxaan jecelnahay inaan isdifaacno marka uu qof ku faraxsaneyn waxan dhahno ama aan sameyno balse dhaqankaas kaama caawinayo xoojinta xiriirkaaga. Marka uu gacaliyahaaga ama gacalisadaada aysan qanacsaneyn dhageyso waxay leedahay ama uu leeyahay adigoo aanan isdifaacin.
Haddii aad qaldantahay qaladaadkaaga qiro oo cafis weydiiso lamaanahaaga kana raalli geli qaladka. Haddii aad ka xumaatay wax uu seygaagu sameeyay ama xaaskaagu sameysay si tartiib ah ugala hadal arrintaas.
Xiriika joogtada ah wuxuu xoojiyaa xiriirka u dhexeeya lamaanaha. Sidaa darteed haka mashquulin inaad telka ka qabato ama aad wacdo gacaliyahaaga/gacalisadaada.
In lamaanuhu ay wada xiriiraan waa tilmaan muujineyso inay israbaan isla markaana uu midba kan kale ka fikirayo.
5 Arimood Oo Lamaanaha Ka Saacidaya Inay Waligood Isjeclaadaan
Markaad qadariso lamaanahaaga, waxaad xoojisay xiriirka idinka dhexeeya. Markaad ogtahay dadaalka gacaliyahaaga/gacalisadaada ay ku dooneyso in xiriirka uu shaqeeyo, Waxaad lamaanahaaga siisay dhiiri gelin ah in intaas kabadan ay sii sameyso. Qiimeey ficilkeeda.
Dhiiri geli oo u Samir lamaanahaaga. Usamir marka ay gacalisadaada sameyso qaladaad. Markaad usamirto xaaskaaga ama ninkaaga isla markaana aad u cafiso qaladaadkiisa iyo danbiyada uu kaa galay, waxaad xoojisay xiriirkiina.
Samirka waa sheeyga guusha u keeno guurka lamaanaha isla markaana farxad iyo jaceyl ka dhex abuuro lamaanaha, halka samir la’aantu ay tahay mid wax waliba burburiso.
Ma xoojin kartid xiriirka kaala dhexeeyo seygaaga/xaaskaaga haddii ninku daacad uusan u noqon xaaskiisa, xaaskuna daacad aysan u noqon ninkeeda oo aysan isku kalsoonaan.,
Wadada kaliya ee aad kalsooni uga keensan karto ninkaaga/xaaskaaga ayaa ah inaad noqoto qof daacad ah oo la aamini karo.
Faa'idooyin Waaweyn Oo Vitamin A Uleeyahay Jirka (Wax Ka Ogoow)
3 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Nacday Xaaskaaga
4 Arrimood oo raggu sameeyaan oo burburiya guurkooda